माफ गर्नुहोस् Careerbuilder! iFilm सुपर बाउल विज्ञापनहरू बोक्दछ Martech Zone
माफ गर्नुहोस् Careerbuilder! iFilm सुपर बाउल विज्ञापन गर्दछ
सोमबार, फेब्रुअरी 5, 2007 सोमबार, फेब्रुअरी 5, 2007 Douglas Karr
ठीक छ, म अखबारको स्वामित्व वाला क्यारर्बुल्डरमा मलाई मन नपराउनुहोस्। यदि मैले केहि थप स्नुपिंग गरेको भए, मैले फेला पारेको थिए कि आईफिलमसँग फिल्महरू वितरण गर्ने अधिकार थियो। यूट्यूबले गरेन। त्यसो भए - तिनीहरू यहाँ छन्, २०० Super सुपर बाउलको मेरो मनपर्ने विज्ञापनहरू:
माफ गर्नुहोस् Careerbuilder! (यद्यपि मलाई अझै पनि लाग्छ तपाईंसँग कुनै पनि अनलाइन भिडियो सोशल नेटवर्कि community समुदाय मार्फत तपाईंको विज्ञापनको पूर्ण र निःशुल्क वितरण हुनुपर्छ)
२०० Super को लागि सबै सुपर बाउल विज्ञापनहरू हेर्न, यहाँ तपाईं जानुहोस्:
iFilm २०० Super सुपर बाउल विज्ञापनहरू